किन रोकियो एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा ? - Health Today Nepal
किन रोकियो एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा ?
September 7th, 2019 समाचार0comments
काठमाडौ,२१ भदौः सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतको एमबिबिएस तहको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आइओएमले सबै विषयको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शनिबारका लागि तय भएको परीक्षा रोकेर दुवै पक्षलाई २५ भदौमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आयुष ओझा लगायतले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत परीक्षा लिन लागेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति, एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायत व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसलाई छल्न मेडिकल कलेज र संस्थानले आफूखुसी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै रिट परेको थियो । आइओएम र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २१ भदौमा प्रवेश परीक्षा लिने तय भएको थियो । त्यस्तै, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले २८ भदौ, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलले ४ असोजमा प्रवेश परीक्षा लिने गरी सुचना निकालेका थिए ।
प्रवेश परिक्षा रोक्न माग गर्दै विद्यार्थीहरुले आइओएममा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यस्तै,आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले अदालतको आदेशको स्वागत समेत गरेका छन् । यस्तै, आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले सबै प्रवेश परीक्षा एकै ठाउँबाट हुनुपर्ने माग राखेका छन् । सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले विद्यार्थीको फर्मबाट उठ्ने पैसाको प्रलोभनमा परेर एकीकृत प्रवेश परीक्षा गर्न नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।
सर्वोच्चले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफालाई आधार मान्दै परीक्षा रोक्न शुक्रबार आदेश दिएपछि आइओएमले एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ, फार्मेसी, बिपिएचलगायत सबै विषयको परीक्षा पनि रोकेको छ । प्रवेश परिक्षाको लागि झण्डै २० हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए ।
Previous article पाल्पामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप, शिक्षणसंस्था समेत बन्द
Next article डेंगुबाट हालसम्म ४ जनाको मृत्यु, ४२ जिल्ला संक्रमणको जोखिममा